Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa uye ikozvino yawanikwa neaya nhau | Linux Vakapindwa muropa
Uye zuva rasvika. Isu tatova neyakareba Nguva Yekutsigira vhezheni yeCanonical system: munguva pfupi, tinogona kuisa Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, kuvhurwa uko, pamusoro pekusanganisira zvinyorwa zvayo, inoenderera mberi nebasa rakatanga mwedzi mitanhatu yapfuura nekuuya kwaEoan Ermine. Semuenzaniso, inosanganisira GNOME 6, inoenderera nekuvandudza mashandiro ayo akaunzwa muGNOME 3.36, uye yaisanganisira rutsigiro ruzere rweZFS semudzi, chimwe chinhu chakasvika muUbuntu 3.34, asi paine zvimwe zvisingakwanisike.
Kune rimwe divi uye sekumwe kuburitswa nyowani, iyo nguva yave ichishandiswa kugadzirisa iyo inoshanda system kernel, ikozvino ichishandisa Linux 5.4. Hakusi kusimudzira kukuru kana tichifunga kuti Eoan Ermine anoshandisa Linux 5.3, asi Canonical inowanzo gara muLTS vhezheni yekernel mune ayo maLTS shanduro, uye ndizvo chaizvo zviri Focal Fossa. Pazasi iwe une rondedzero nenhau dzakatanhamara izvo zvauya pamwe neshanduro iyi.
Ubuntu 20.04 LTS yakakwira
Makore matatu ekutsigirwa, kusvika Kubvumbi 5.
Graphical nharaunda GNOME 3.36, iyo inosanganisira:
Yakagadziridzwa skrini yekugovana rutsigiro muWayland.
Yakagadziridzwa manejimendi pazvikwata zvine akawanda maGPU.
Kubatanidzwa kweGraphene muGNOME Shell uye Mutter.
Flatpak sandbox rutsigiro muWebKit 2.28. Iwe zvakare wakagonesa WebGL uye Webhu Audio mune iyo WebKit marongero.
GNOME Shell inotsigira kuvhura kwakagadzirwa maitiro pane systemd zviyero.
Iyo menyu menyu yakarongedzwa zvakare.
Iwo dialog dialog akagadzirwazve.
Kazhinji kugadzirisa mune yemushandisi interface.
Yakagadziriswazve skrini yekumba.
Kugona kutumidza zvakare mafaera ekutanga eapp.
Iyo Yekuwedzera app zvino yasanganisirwa kubata GNOME yekuwedzera.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwezviratidzo.
WireGuard rutsigiro: ichi chiitiko chakaburitswa naLinus Torvalds muLinux 5.6, asi Canonical yaunza (backport) kuti iwanikwe mushanduro nyowani yehurongwa hwavo hwekushandisa kunyangwe iwe ukashandisa Linux 5.4.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweZFS.
Chinyorwa cheMugadziri paunotanga iyo system, padhuze pezita reUbuntu.
Iyo Amazon app yabviswa.
Mapikicha matsva, ayo anosanganisira anokunda "World Cup", inova Ubuntu 8.04.
Nyowani vhezheni yeYaru, uko iyo yerubergine ruvara inomira mune mamwe mamenu / mabhatani uye grey mune maforodha. Inosanganisira zvakare akareruka, erima, uye akavhenganiswa madingindira.
Tsigiro yemazhinji-Monitor GDM.
Fractional kuyera muXorg.
Yakagadziridzwa mapakeji neshanduro dzazvino dze software dzakadai seFirefox kana Thunderbird.
Ubuntu 20.04 LTS ikozvino iripo kuisa, asi isu hatigone kuidhonza kubva kune yepamutemo webhusaiti, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Ehe, isu tinokwanisa kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni kubva kune yekushandisa system, chimwe chinhu chatinogona kuita kubva kune yekuvandudza maneja kana nekuvhura terminal uye typing zvinotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Canonical inoburitsa Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ine nyowani Yaru theme, GNOME 3.36 uye 5 makore ekutsigira
Paunenge uchiita kubva kuchiteshi iwo murairo sudo do-release-upgrade inoti:
Iko hakuna kuvandudza vhezheni yeLTS inowanikwa.
Ini ndinofungidzira kuti haisati yavapo zvakadaro (Kubvumbi 24, 2020 13.30pm kubva kuArgentina)
Mhoroi, Pablo. Edza kugadzirisa-maneja -c -d. Kana iwe ukashandisa Ubuntu, iyo package yatove kuiswa. Kana iwe ukashandisa imwe distro (seKubuntu), unofanirwa kuiisa pakutanga (Sudo apt kuisa yekuvandudza-maneja).
Yakakura, saka kana ichishanda. Ndatenda!! Zvamunoratidza ndiyo mhinduro (zvirinani kune Ubuntu 18.04.4).
Ini ndakamaka kuti inozivisa iyo LTS shanduro mune software inogadziridza chikamu asi neicho haina kushanda kana.
Kubva kuZvirongwa «ndizivise nezve itsva vhezheni», tarisa bhokisi uye rinoshanda
Pindura kuna Shemodo